Youtube Analytics waa kan | Martech Zone
Khamiista, Diseembar 1, 2011 Arbacada, February 22, 2017 Douglas Karr
Hadaadan wali galin, Youtube waxay cusbooneysiisay aragtideeda xirmo cusub, muuqaal buuxa leh Analytics xirmo.
Waa kuwan qaar ka mid ah astaamaha ugu dambeeyay ee Falanqaynta Youtube:
Bog muuqaal guud ah oo fiican.
Warbixin qoto dheer oo ay ku jiraan tirakoobyada kaqeybgalka sida lagu qiyaaso waxyaabaha, waxyaabaha aan necebayn, faallooyinka iyo waxyaabaha ugu cadcad ee lagu daray ama laga saaray.
Fiidiyowyada ugu sareeya ee wada aragtida iyo rukunka ugu badan.
Warbixin haynta dhagaystayaasha cusub oo muujineysa inta fiidiyowyada ee daawadayaashaada kujiraan.
Youtube ayaa soo saartay tan Falanqaynta Youtube Analytics oo leh sharaxaad ku saabsan isbeddelada:
Halkan Martech, waxaan ku aragnay koror muuqda ee taraafikada fiidiyowyadeena iyo sidoo kale gaadiidka ka imanaya fiidiyowyadeena dib ugu noqoshada bartayada. Waa sababta aan u horumarinay a Qalabka Sidebar Youtube annaguna u wanaajiso fiidiyowyadayada Youtube raadinta.
Xaqiiqdii, waxaan ku arkeynaa fara badan fiidiyowga in aan kordhin karno wax soo saarkeena fiidiyowyada toddobaadlaha ah halkan goor dhow oo ay weheliso kafaala-qaade rasmi ah oo fiidiyoow ah! Arrintayada fiidiyowyada ayaa ah inay aad u yaraayeen oo ay aad u kala fogaadeen oo xoogaa aan is-waafaqsanayn. Waxaan rajeyneynaa inaan soo saarno fiidiyowyo badan oo leh waxyaabo aad u badan oo ku saleysan soo noqnoqoshada. Waanu kula soo socodsiin doonaa
Tani cusub Analytics xirmo ayaa runtii kaa caawin doonta inaad hoos u dhigto waxyaabaha ka dhigaya kaqeybgalka ugu badan ee akhristayaashayada!
Tags: AnalyticsFiidiyowyada SuuqgeyntaFalanqaynta fiidiyoowgayoutubefalanqaynta youtubefalanqaynta fiidiyowga youtube